Uxolise ngembuzi uMphako ku-3 Second
UMPHAKO ngesikhathi ezoxolisa kuDkt 3 Seconds ngembuzi ngokumdelela. Isithombe: FACEBOOK/DR3SECOND
THOKOZANI NDLOVU | June 4, 2019
IGCINE ikubalekele ukuyokwelusa izinkomo zika-3 Second imbongi yeGcokama Elisha, uMphako ngokuthi izohlawula ngembuzi kulo melaphi wendabuko waseMpangeni.
UMphako ubegwetshwe ukuthi akhiphe imbuzi noma izinkukhu ngokwehlisa u-3 Second isithunzi owayembize neGcokama Elisha ukuthi bezochaza nge-albhamu yalo mculi iDog Style abazwakala bedelela abaculi kuyona. UMphako wadelela u-3 Second ngokuthi athi ngeke eze ukuzoxolisa futhi usekhathele uyena njengoba elokhu ebiza abaculi bakamaskandi ukuthi abazoxolisa uma bexabene.
UMphako waze wabhala nakuFacebook ukuthi u-3 Second akathathe isiginci angene estudiyo ashayane neGcokama Elisha ngengoma.
Ngemuva kwale nkulumo le mbongi ibe nezinkinga isiphupha u-3 Second eyigwaza ngobhoko eyibuza ukuthi kungani ingamhloniphi. Kuthiwa nethelevishini ubengasayibuki uMphako ngoba bekuvele kube sengathi kuqhamuka u-3 Second kuyona egqoke umqhele wakhe.
UMphako naye ukuqinisekisile ukuthi impela ubenenkinga waze wayocela uxolo ku-3 Second.
Esefike kuyena lo melaphi umtshele ukuthi kumele alethe imbuzi noma izinkukhu azoxolisa. Wathi uma engenayo into azoxolisa ngayo kuzomele azokwelusa izinkomo zakhe izinsuku ezintathu ukuze kuphele isigwebo.
UMphako bekulindeleke ukuthi alethe imbuzi ngeSonto noma aqale ukwelusa izolo ka-3 Second njengoba ayevumile ukuthi uzokwenza kanjalo uma engabi nawo amandla okukhipha imbuzi yenhlawulo.
Izolo uMphako ugcine eyilethile imbuzi abethembise ukuthi uzoyiletha ezoxolisa.
U-3 Second uthe uyamxolela wathi imbuzi le abeyilethile uzobikela amadlozi akhe ngayo ukuthi usexolisile. Ngesikhathi efika uMphako ka-3 Second, lo melaphi uke wasikaza nokumkhiphisa inkomo kodwa wabuye wehlela ngezansi.